7 Amashishini ahamba phambili eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 7 Amashishini ahamba phambili eYurophu
Thatha uloliwe uye kwindawo efanelekileyo ukuqhekeka kwesixeko okanye ezivenkileni, Ezona ziqu zibalaseleyo eYurophu zinako konke. Iimarike zentakumba zilapho i-retro kunye neyangoku, yangoku nembali, Yiyani kunye, apho kuvela khona izinto ezinkulu, kunye neyethu 7 Ezona ntengiso zintle eYurophu zezona zilungileyo.
Ukuba uyakuthanda ukuthenga, kwaye ngakumbi ingqokelela yeediliya, emva koko ezi 7 ezona ntengiso zintle eYurophu ziya kuzaliseka. Landela nje iimarike zethu zokugqibela kwizikhokelo zaseYurophu, kwaye ubambe ityesi enkulu!
1. Imarike yaseMunich
Ukuba usiya eBavaria kwifayile Iiholide zaseYurophu entwasahlobo, kwaye ujonge ubutyebi obutsha beediliya, ke uya kuyithanda imarike enkulu yaseMunich. Le ntengiso intyikitya intle iphawula umthendeleko wasentwasahlobo kwaye ibanjwa kube kanye ngonyaka.
Kuya kubakho ngaphezulu 2000 abathengisi, ngeediliya ezimangalisayo yiyo, Njengengxowa kaLouis Vuitton ngamaxabiso ahlekisayo. ngoko ke, Kuya kufuneka ucacise ukuba ngoMgqibelo kwimarike yentengiso yaseRiesen-Flohmarkt Theresienwiese eMunich. Ukwengeza, yiza noluhlu olucacileyo lokuthenga, kwaye ube khona kwangoko kangangoko unako. Amasango avulekile e 4 am, kwaye awuyi kuba kuphela kwentaka yokuqala!
2. Intengiso yeAmsterdam
Kwimeko apho ubungazi, IAmsterdam sisixeko esinembali yorhwebo etyebileyo. ngoko ke, Akumangalisi ukuba enye yezona ntengiso zibalaseleyo eYurophu iseAmsterdam. Kanye ngonyaka, Izitalato ezintle eAmsterdam, jika ube yindawo yentengiso evulekileyo, apho ungathenga khona kwaye ungene ngaphakathi kwimeko entle izixeko ezikhulu eYurophu.
Kanye ngonyaka, njengombhiyozo kuSuku loKumkani, Imijelo kunye neendlela zeAmsterdam ziguqula zibe yimarike enkulu. Ukuvuna ichic, art, izixhobo, kwaye obunye ubutyebi obusebenzisekayo buya kukulinda kule ntengiso intoyikekayo.
Nini? 6 am ukuba 8 emva kwemini nge-27 ka-Epreli.
Eyona ntengiso inkulu kwaye idumileyo eFrance, Intengiso yentengiso yaseGrande Braderie de Lille iza kubamba 10,000 abathengisi.
Intengiso yentengiso yeLille sesona siganeko sikhulu sonyaka kwaye senzeka kwimpelaveki yokuqala kaSeptemba. Ukuba ukwivini, kunye nezinto ze-retro, emva koko ungathanda ukubhukisha itikiti eLille ngoSeptemba 4th– 5th, for extravaganza yeediliya.
Kuyatshiwo, eya kukusa kufutshane 40 iiyure ukuhamba nje kuzo zonke izitendi, kwaye ngaphandle kokuma kunye nokuthenga.
Amabinzana ambalwa aluncedo ukugcina & funda:
“Leliphi elona xabiso lakho lihle?”- Leliphi elona xabiso lakho lihle?
"Iikhuphoni la poire en Deux" - Masidibane embindini / sitrayine
Njani ukuba akukho? Thatha iyure Uhambo lweTGV ngololiwe ukusuka eParis.
4. Intengiso yasePortobello Road eLondon
Eyona ntengiso intle eNgilane yenzeka yonke imihla kwimarike yasePortobello eLondon. Ifashoni, Izinto zakudala, ukudla, kwaye ubuncwane bendlu yesibini buya kukulinda yonke imihla yeveki, kodwa zilungiselele ukonyusa amandla kunye nombala ngoMgqibelo.
ke, emva kosuku lokuthenga izinto zakudala, ungabamba imifuno emnandi, cheese, kunye nokunye ukuphatha isidlo sasemini ngokukhawuleza ngaphambi kokuqhubeka nokufuna kwakho iidiliya kwintengiso yefashoni eWestway. Ukutyelela imarike yePortobello Road yenye yezona zinto zibalaseleyo zokwenza eLondon, Kwaye kuya kufuneka unikezele usuku olupheleleyo kwintengiso yentakumba kunye nomhlaba waseLondon.
5. Intengiso yeParis
Xa sicinga ngeParis, sikhawuleza siwubone lo moya. Ekhethekileyo, lubizwa, mandulo, Ubukhosi bonke buza engqondweni neParis, nakwimarike yakhe emangalisayo.
Imarike yentakumba yaseParis yenye yezona ntengiso zintle eYurophu ngenxa yobutyebi obunqabileyo obufihliweyo. Ubugcisa baseAfrika, iziqwenga zokuhombisa zeediliya, kwaye iimpahla zimbalwa zezinto oza kuzifumana kule ntengiso inkulu.
Ukuba unqwenela ukuzisa intwana yeParis, emva koko intengiso yaseParis yindawo yokuthenga. Uqala imfuno yakho Rue des Rosiers, isitalato esikhulu, kwaye uhambe phantsi ukuze ungene kwiimarike ezahlukileyo.
Njani ukuba akukho? Thatha i-metro, intloko ePorte de Clignancourt kumgca 4, kwaye ulandele izihlwele ukuya kwindawo enkulu yekhonkrithi.
6. Intengiso yeBhola yaseBrussels
Intengiso ekuphela kwayo evulekileyo 365 iintsuku ngonyaka, Intengiso yeMidlalo yeBhola eBrussels, yeyona inkulu eBelgium.
Kwintliziyo yesithili saseMarolles, uya kufumana iirekhodi zokuvuna, kunye neencwadi ezinqabileyo ezibekwe ezingubeni. Kwizitrato ezikufutshane, uya kufumana iivenkile ezingamasekeni kunye nezinto zakudala.
Nini? Elona xesha lilungileyo lokufuna ubuncwane ngoLwesine nangoLwesihlanu.
Phi? Indawo du Jeu de Balle Brussels
Zininzi iimarike zentakumba eMilan, kwaye ayimangalisi loo nto kuba iyinkunzi yefashoni yehlabathi. IMercatone dell'Antiquariato yeyona ntengiso inkulu eMilan kwaye yenzeka ngeCawe yokugqibela yenyanga nganye. Kuza kubakhona i 380 izitendi zefanitshala yasendulo kunye nempahla yeediliya, Lindela wena.
kunjalo, Eyona ntengiso inqabileyo eMilan yiNtengiso yaseMpuma. Ukuba ujonge iziqwenga eziqokelelweyo okanye ubugcisa banamhlanje emva koko uyothandana nemarike yentakumba yaseMpuma. ngaphandle, ungabamba isidlo sasemini okanye ibhiya kwiseti ye-DJ, ngelixa uzula zula kwiimarike ezipholileyo. Nje ukuba ungene, awuyi kufuna ukushiya le nto Retro & Itheko leediliya.
Phi? Ukuhamba ngeMecenate, 84
Nini? Rhoqo ngeCawa
Ufika njani kwiNtengiso yeMpuma eMilan? Thatha umgca we-M2 metro
IYurophu kukuhlangana okumnandi kweetro kunye nezala maxesha, eza kuhlala kwezona ntengiso zimangalisayo. Uhambo oluya eYurophu aluyi kugqitywa ngaphandle kokuchitha usuku kwenye yezona zilungileyo 7 Iimarike ezikhulayo eYurophu. Ngaphezu, ukubuyela ekhaya ngaphandle kokungenani 1 isiqwenga sokuvuna sifana nokuba awuzange utyelele iYurophu kwaphela.
Apha Gcina A Isitimela, singavuya ukukunceda ucwangcise uhambo lwakho kwezi 7 ezona ntengiso zintle eYurophu.
Ngaba ufuna ukufaka iposti yethu yebhlog "I-7 yeeNtengiso eziLungileyo eYurophu" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-flea-markets-europe%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
elingezi Ukoyisa Iifama Ukurhoxa Imakethe yangaphandle shopping train Travel